Burma Strange News (Burmese Version): ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ ??
Posted by BS News at 10:49 PM
Those r Bitch....suchashame on being Burma :(
ကြက်သရေတုံးတဲ့ ပုံစံတွေတွေ့ လိုက်ရတယ် ...
ဟုတ်ကဲ့။ ဖာ တိုင်းပြည်ကြီး တိုးတက်အောင် တတပ်တအား လုပ်ဆောင်နေတာပါ။
ဘာတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ ဆိုတာထက် ဘယ်သူ့မှာတာဝန်ရှိသလဲလို့ မေးကြ မြန်းကြ အရေးယူဆောင်ရွက်ကြဘို့သင့်ပါပြီ။ ဂုဏ်ယူစွာမြူးထူးခုံပေါက်ပြသနေကြတဲ့ celebrity ဆိုသူတွေကို မေးလိုတာက ကမ္ဘာကျော် ပက်ပုံး အရပ်(Patpong of Bangkok)ကိုရောက်ဘူးကြပါသလားလို့ပါ။ သူတို့ကိုရော sponsors တွေကိုရောတောင်းဆိုချင်တာက မင်းတို့တွေ၊ သင်းတို့တွေ Patpong Celebrity ဖြစ်ရမှာ မရှက်ကြရင် သဘောပါ။ သမိုင်းမှာ (နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ)အစဉ်အလာကြီးမားလှတဲ့ ကန်တော်ကြီးမြေကို Patpong of Yangon ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အထိတော့ အရှက်သိက္ခာ မဲ့ကြဘို့မသင့်ပါဘူး၊ မမဲ့ကြပါနဲ့ ဆိုတာပါပဲ။
တခြားလူမျိုးတွေအဲလိုလုပ်နေရင်တော့ ပုရိသတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေပေမဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးအဲလိုတွေလုပ်နေတာတော့ ရွံဖို့ကောင်းနေတယ်ဗျာ.....ကြည့်လည်းလုပ်ကြပါဦး ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အဲလိုနေရမယ်လို့ ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှ မတွေ့ဘူးဘူးနော်
ပြောရင်လည်းလွန်တယ်ဖြစ်ဦးမယ်.... တရား ကလွန်နေပြီ...
ဒါမျိုးတွေခိုးရမယ် ဆိုမသင် ရဘူး....
အဲဒါဒို့မြန်မာ.. (ဒို့ဗမာ ဟုမသုံးမိပါစေနှင့်)
အဲဒါ မြန်မာ မကောဟုတ်၇ဲ.လား။ ၇ွံဘို.ကောင်းလိုက်တာနော်။ အစိုး၇ကပေါင်ပေါ်အောင်မဝတ်၇လို. အမိန်.ထုတ်တုန်းက တော. အဲဒါလူအခွင်.ေ၇းဆုံးရှုုံးတယ်ဆို။ ကိုဒီမို နဲ. မ ခေ၇းဇီးတို.ေ၇။ အခုတော. ဖာဖြစ်ကုန်ပြီလား။
ချာတူးလန် May 24, 2011 at 7:59 PM
အတော်ဟုတ်လှပြီ မှတ်နေကြလား မသိဘူး။ အကပညာအနေနဲ့ကြည့်ရင် သူများနိုင်ငံတွေက ကလေးတွေ အပျော်တမ်းဝါသနာရှင်တွေ အဆင့်တောင် မရှိဘူး။ အကအမျိုးအစားကြည့်ရင်တော့ အဖော်အချွတ်ကလပ်တွေမှာပဲ ကတဲ့ သောက်ဆင့်မရှိတဲ့ အကမျိုး၊ performance မျိုးတွေချည်းပဲ။ ဒီ ကကြိုးကကြောင်နိုင်လှတဲ့ ချာတိတ်တွေထက် သူတို့ကို သင်ပေးနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ အေဂျင်စီတွေ ၊ မော်ဒယ်ဆရာကြီးတွေ အကဆရာ ဆရာမတွေကိုသာ ကော်ဆဲချင်တော့တယ်။ အဆင့်မရှိတဲ့ အခွေတွေ အကတွေလောက် မြင်ဖူးပြီး အဟုတ်မှတ်လို့ ချာတိတ်တွေကို သင်ပေးမနေကြနဲ့။
ကြည့်ချင်အုံးဟဲ့... ငါဘာသာနေတာ အကောင်း ဆပ်ဆော့ပြီးကြည့်မိတာ ငါ့အမှား.... ဘုရား ကယ်ပါ....
ငါတော့ကြိုက်တယ်ကွာ.. မနေနပ်တဲ့ကောင်တွေ လဲသေလိုက်ကြ
စရက သန်းရွှေ May 25, 2011 at 7:14 PM
ဘုရားဘုရား အဲ့ဒါမြန်မာမတွေ မဖြစ်ပါစေနဲ့..ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ..
တိုင်းပြည်မှာ အလုပ်အကိုင်တွေ ရှားပါလို့ ခုလို ရှာဖွေစားသောက်နေကြရတာထင်ပါရဲ့..။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း ဒီကလေးမတွေရဲ့ မိဘတွေက သဘင်အတီးအမှုတ်ဝါသနာအတော်ပါကြပုံရတယ်.။ သို့ဂလိုကြောင့် ကိုယ့်သမီးတွေကို ခုလို အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ရမယ်..။ ဒါပေမယ့် "သမိုင်းမှာ (နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ)အစဉ်အလာကြီးမားလှတဲ့ ကန်တော်ကြီးမြေကို Patpong of Yangon ဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့အထိတော့ အရှက်သိက္ခာ မဲ့ကြဘို့မသင့်ပါဘူး။ "
အိုင်လိုက်အစ် အိုင်လိုက်အစ်.....မမြင်ချင် မကြည့်ကြနဲ့ ။း)
rapper June 3, 2011 at 12:28 AM
အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ ဆန့်ကျင်ပေးကြပါ ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူး
@ 00:01.. it says Booby Soxer :P